ပြည့်စုံ tool အဖြစ်နှင့်ဆိုင်သေဆုံး, ငါတို့ဖိုင်ဘာလေဆာ, CNC လာကြတယ်, CNC ကွေး, CNC ဖွဲ့စည်းရန်, ဂဟေဆော်, CNC စက်, ဟာ့ဒ်ဝဲသွင်းစုဝေးအပါအဝင်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများအပေါငျးတို့သဒေသများရှိကျွမ်းကျင်ကြသည်။
ကျနော်တို့စာရွက်များ, ပန်းကန်, အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ပြွန်ထဲမှာကုန်ကြမ်းကိုလက်မခံခြင်းနှင့်လူမီနီယမ်, ကြေးနီ, သံမဏိနှင့်ကာဗွန်သံမဏိကဲ့သို့အပစ္စည်းများကိုအမျိုးမျိုးအတူလုပ်ကိုင်အတွက်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများဟာ့ဒ်ဝဲသွင်း, ဂဟေဆော်, ကြိတ်, စက်, လှည်စုဝေးများပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ volumes ကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်လည်းငါတို့ရဲ့သတ္တုနေမှုကိုချေဖျက်ဌာနများတွင် run ဖို့ခဲယဉ်း tool များ၏ option ကိုသင်၏အစိတျအပိုငျးရှိသည်။ စစ်ဆေးရေးရွေးချယ်စရာရိုးရှင်းသောအင်္ဂါရပ်စစ်ဆေးမှုများကနေလမ်းအပေါင်းတို့ Fair & PPAP မှတဆင့်အထိ။
Anebon customized metal stamping includes punching, bending, stretching, embossing and other operations. Each process is performed using CAD/CAM designed tools that can provide the required precision for complex parts. Sheet metal stamping isafast and effective method to produce durable, high-quality parts for the hardware, aerospace, medical, electronics, industrial, lighting and other industries. ကျနော်တို့ကိုသင်စိတ်ကူးထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအသင်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မယုံကြည်ပါတယ်။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ Aluminum (all grades) Stainless Steel
Rongtong စက်မှုပန်းခြံ, Wulian စက်မှုဇုန်လမ်း, Fenggang မြို့, Dongguan, တရုတ်။
လူမီနီယံသတ္တုများပုံသွန်း, လူမီနီယံ ချ. အစိတ်အပိုင်းများသေဆုံး , သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း , စိတျအပိုငျး ချ. သေဆုံး , အလူမီနီသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. ,